Kuqondane ukuthi ubuhlungu gqwa kule axilla kwenzeka ngokumelene isizinda menopause lapho isidumbu sowesifazane egcina izinguquko ngempela ebalulekile hormone. Kodwa ubuhlungu ikhwapha njengoba menopause kuncipha ngenxa ukushintsha kwama-hormone futhi kakhulu noma anyamalale bonke abesifazane postmenopausal. Uma ubuhlungu iqhubeka, lo wesifazane ezinqunyiwe izidakamizwa hormone ukulapha esikhundleni.
Uma zisezingeni zokuzala kukhona ubuhlungu ikhwapha, ke egomela kuphula umthetho we amanzi lymph. Ngokuvamile, lokhu kwenzeka ngaphambi ukuqala menses (mastalgia eyindilinga) kanye kungase kuhambisane the tuberosity we nezindlala mammary lanwetshwa zamanzi. Ngokuvamile, lezi amasayithi ngempela esithambile futhi kobuhlungu. Ngaphezu kwalokho, ziyivelakancane futhi nokuqaqeka kalula. Lolu hlobo ukwephulwa ezitholakala two-thirds nebafati labasebasha akuyona igcwele yimuphi usongo olukhulu.
Kodwa ngezinye izikhathi ubuhlungu ikhwapha kungase kube ubufakazi babenenkinga engathí sina zempilo yakhe. Esikhathini axilla zinganikwa ubuhlungu zingaveli ku mammary lwezimpawu indlala. Ngakho lymph node zihlala zinjalo (ngaphandle kokukhulisa futhi offset), akukho iphunga ezingemnandi izithukuthuku, futhi akukho streaks of amabala amnyama izingubo. Seals kungenzeka kubonisa mastitis, mastitis, kanye izimpawu zezifo Umdlavuza webele. Phezu ukuthola seal ezifana kulobubuhlungu akufanele ukuzindela futhi ngokushesha ukuya kudokotela.
Ubuhlungu ikhwapha kungaba isifo gidradenity yi ( "Ukucinga umbele" edume ngokuthi). Lesi sifo kwenzeka lapho eziningi umjuluko nezindlala ikhwapha, wahlela ngendlela ekhethekile, ngokusebenzisa Amapayipi uthola staph, strep noma ezinye izifo. It wenza ukubukeka red knot iqhubeka nokuvuvuka ngesimo Isigaxa. Kulezi ISIZINDA abe ovelele alube ubovu khulula. Ubuhlungu ikhwapha bengasenakubekezela, futhi into eyodwa kuphela - ukuhlinzwa. Kodwa ngisho nangemva kokuhlinzwa ukususa ubuhlungu hidradenitis ekusekele- ngaphansi ikhwapha ngakwesokunxele noma ngaphansi ngakwesokudla ingafaka sokukhathazeka ngokushabalala nesineke. Qinisa isimiso sokukhuculula yayo, efakwe emva plasty. Odokotela Nokho ebekiwe emva kokuhlinzwa amaphilisi ezinhlungu izidakamizwa ukuze akhulule isimo lesiguli, kodwa ubuhlungu namanje isekhona isikhathi eside ngokwanele. Futhi ngisho ne ukwehla ubuhlungu emva ukuqedwa zomuthi opium isikhathi eside, isiguli singase uzizwe kabi ngendlela ndikindiki futhi ukulunywa e emakhwapheni.
Ubuhlungu ngaphansi ikhwapha kwesokunene noma kwesobunxele kungase isignali ye-isifo oncological noma yikuphi ukulimala kule ndawo. Ngakho ngokushesha ngangokunokwenzeka kwaqala ukuphazamisa le zomile, ubuhlungu ezidabukile, ngijuluka, kwakukhona nephunga abukhali izithukuthuku, izindlala zamanzi sigudluke noma ukwanda kwemithwalo, uba nenhliziyo encane, - ngokushesha ukuya kudokotela.
Ubuhlungu ikhwapha kwesokunxele kungenzeka ngenxa dystonia semithambo ohlobo inhliziyo. Inhliziyo ingubo, ukuqaqamba, kunikeza ukuphazamiseka, liqinile the iphakamisa ukuhlokoma esifubeni. Lokhu ubuhlungu inikezwa uhhafu kwesokunxele zomzimba womuntu - ehlombe, ikhwapha, engxenyeni engenhla, ehlombe, ingalo. Ukuba khona kwalawa izimpawu kufanele kube yisizathu Ukuvakashela wenhliziyo.
Uma une ubuhlungu ikhwapha, ungakwazi uthintane traumatologist, udokotela wezinzwa, udokotela ohlinzayo, oncologist. Udokotela isabele ukuhlolwa, futhi kuncike Imiphumela noma ngqo kudokotela onguchwepheshe, noma uqale Inkambo yokwelashwa lesi sifo siyachazwa.
Musa self-medicate, ningalwi yedwa ngenxa yokugula. Lapho ubuhlungu ikhwapha ubheke kuphela ochwepheshe abafanelekayo!
SSD-ukushayela kwikhompyutha kanjani ukukhetha: ukubuyekezwa, izincazelo, amamodeli Izibuyekezo